वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको ग्ल्यामर : पदावधि विवाद र कार्यक्षमता | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको ग्ल्यामर : पदावधि विवाद र कार्यक्षमता
on: १३ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:२१ लेख | दृष्टिकोण
वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको ग्ल्यामर : पदावधि विवाद र कार्यक्षमता
नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई अचेल सीईओ भन्ने चलन शुरू भएको छ । पहिलेपहिले यस्तो पदलाई महाप्रबन्धक भनिन्थ्यो । यो सीईओ भन्ने पदावलीको सिको भने अमेरिकी कम्पनीहरूको हो । खासगरेर नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार र प्रतिस्पर्धा शुरू हुन थालेपछि संस्थाका प्रमुखको पुरातनी नाम पनि परिवर्तित भएको हो । यसको ग्ल्यामरकै कारण यो पदावलीप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण हुन थालेको हो । महाप्रबन्धक पद सीईओको तुलनामा अलिक कम स्तरको÷कम ओजको जस्तो लाग्ने अनुभव त्यसबेला यो पदावलीको विकासमा लागिपर्नेहरूसित ताजै छ । खासगरेर विदेशतिर सभासम्मेलनमा भाग लिन जाने नेपाली महाप्रबन्धकहरूलाई यस खाले तीतो अनुभवले पिरोलेको थियो । त्यस्ता सम्मेलनमा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा भाग लिन आएका अरू सीईओहरूको दृष्टिमा नेपाली जीएम पद भने प्रशासनिक क्रममा केही तलको हो कि ? भन्ने अनुभूत हुँदो रहेछ । यस्तो अनुभव यो लेखकसित पनि रहेको छ । कतिपय भारतीय बैंकहरूमा त प्रमुख महाप्रबन्धकको पद पनि रहेको हुँदा विदेशीका दृष्टिमा नेपालीहरू उनीहरूको दर्जाका तुलनामा केही तल्लो प्रशासनिक पदका रहेछन् भन्ने अनुमान हुने नै भयो । यो फरक फरक देशको प्रशासनिक संरचना हो । सामान्यतया अचेल सीईओको कन्सेप्ट प्रयोग हुन थालेको छ । तर, कतिपय सरकारी सस्ंथानहरूमा भने अझै महाप्रबन्धक भन्ने पदावली प्रयोगमा ल्याइएको छ । यी दुई पद एउटै प्रकृतिका होइनन् कि भन्ने भ्रम पनि छँदै छ । अझ कतिपय संस्थानमा ‘अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक’ को व्यवस्था पनि देखिएको छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओ पदको ग्ल्यामरको अनुभव निकै लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । तिनका कार्यशैली, अवधि र माइग्रेशनमा निकै उतारचढाव बेहोरिसकेका छन् । तर पनि यस पदको ग्ल्यामर र पदावधिबारे पर्याप्त बहस भएको देखिँदैन । अब त्यसको बहस थालिनुपर्छ भन्ने नै यस लेखको मूल आशय हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ ( बाफिया) ले सीईओको कार्यकाल (दफा २९) मा तोकेको छ । त्यस्तो कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र कुनै सीईओ अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसरी उनीहरूको पदावधिको उपल्लो सीमा बढीमा ८ वर्षको हुने कानूनी व्यवस्था छ । बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत धेरै कम्पनीहरूमा सीईओको यस्तो अवधि ५ वर्ष रहेको देखिएको छ । फच्र्युन पत्रिकाको अध्ययनमा सीईओको औसत कार्यकाल ४ दशमलव ९ वर्ष भएको भेटिएको छ । अध्ययनअनुसार कतिपय विदेशी बैंकले ४ वर्षका लागि सीईओको नियुक्ति गर्ने र त्यसलाई २–२ वर्षका दरले अर्को एक अवधि अर्थात् थप ४ वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रचलन पनि भेटिन्छ । कतिपयले ६ वर्षलाई उपल्लो सीमा राखेका हुन्छन् । कतिपयले भने पहिले ३ वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने र पछि २ वर्ष थप्ने चलन पनि देखिन्छ । यो हेर्दा सीईओको कुनै आदर्श पदावधि देखिँदैन । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन÷ व्यवहारलाई हेर्दा बढीमा ८ वर्षको पदावधि, दुईपटक गरेर राख्नु उचितै हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अमेरिकामा देशको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति २ कार्यकालभन्दा बढीलाई निर्वाचित नहुने परम्परा रहेको छ । कति अवधिचाहिँ आदर्श हो त भन्ने उदाहरण दिन यो अमेरिकी प्रचलन एउटा अनुकरण बन्न सक्छ । जो कोही कार्यकारी प्रमुखले धेरै लामो समयसम्म संस्थाको प्रमुख भएर रहँदा ‘अटोक्रेसी’ बढ्ने डर हुन्छ । त्यसले ऊ अराजक हुँदै जाने र त्यसबाट सामान्य निकासलाई निष्क्रिय बनाउने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी त्यस खाले संस्कारले तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा जाने वृत्तिविकासलाई पनि निस्तेज पार्छ । सामान्यतया बाहिरबाट कार्यकारी प्रमुख लिइन्छ भने उसको पदावधि ५ वर्षको राखिनु उचित हुन्छ र भित्रबाटै ( करियर ग्रोथ ) लिने भए ३ वर्षका लागि उचित हुन्छ । नेपाली वित्तीय संस्थाहरूले एक कार्यकाल ४ वर्षको हुने र ऊ पुनः अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राखेकाले सीईओको कार्यकालको उपल्लो हद ८ वर्षको हुने कानूनी व्यवस्था मानेको देखिन्छ । तर, यो कार्यकाल संशोधित बाफिया ( २०७३ ) लागू भएका दिन ( २०७४ वैशाख १०) देखि गणना हुने हुँदा त्यसपूर्व सीईओ भएकाहरूले तोकिएको ८ वर्षभन्दा पनि बढी सो पदमा बहाल हुने स्थिति कानूनले नै दिएको छ ।
सामान्यतया सीईओ भनेको एउटा निश्चित उमेर, योग्यता, पदीय अनुभव र उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्तिको परिकल्पना हो । यस पकिल्पनामा उसले संस्थालाई निश्चित गति प्रदान गर्नसक्ने क्षमता पनि राख्छ भन्ने नै हो । उसलाई दिइएको अवधिमा निश्चित प्रकारको प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा उसलाई नियुक्त गर्ने अधिकारी अर्थात् सञ्चालक समितिले राखेको हुन्छ । कतिले निश्चित मुनाफाको प्रतिफल नै पनि तोकिदिन्छन् । ऊ कम्तीमा पनि असल, इमानदार र संस्थागत सुशासनलाई बढावा दिने हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना पनि होला । निर्णय दिन सक्ने क्षमता भएको, नेतृत्वदायी क्षमता पनि भएको लगायत धेरै कुराको अपेक्षा एउटा सीईओबाट गरिएको हुन्छ । यसैले नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा त के पनि भनिन्छ भने बैंक चलाउने भनेकै सीईओले हो । सञ्चालक समिति त स्थापना मात्र हो पनि भन्ने गरिन्छ । यी नै कारणले पनि उसलाई कहिलेकाँही अराजक हुन हौस्याउनु स्वाभाविक हो । ‘म त संस्थाको प्रमुख हो । मैले भनेको सबैले मान्नुपर्छ वा मैले देखेको नै अन्तिम सत्य हो’ भन्ने सोचले कहिलेकाहीँ सीईओले स्वयम्लाई एउटा सम्राट् र सैनिक जर्नेलजस्तो अनुभूति गर्नु पनि कुनै आश्चर्य होइन । तर, बुद्धिमानी के हुन्छ भने जसले यस्ता कुरालाई बिर्सन सक्छन् तिनीहरू नै सफल सीईओ बन्न सक्छन् । गर्नेका लागि ५ वर्ष धेरै ÷ लामै समय हो । नगर्नेका लागि ८ वर्ष पनि थोरै हो । जो कम उमेरमा सीईओ हुन्छन् ती बढीभन्दा बढी कसरी सीईओमा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने मनोचिन्तनमा हुने हुँदा सीईओको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम उमेर तोकिनु पनि उचितै हुन्छ । यो भनेको ४० देखि ५० वर्षको उमेरलाई एउटा सक्रिय सीईओ छनोटको प्रवेश आधार वर्ष बनाउन सकिन्छ । चलायमान र सक्रिय रहिरहन पर्ने हुँदा ५० वर्ष नाघिसकेकाहरूलाई सीईओमा छनोट गरिनु उचित होइन । चाहे लगातार होस् वा पटकपटकको नियुक्ति होस् कुनै पनि सीईओले एउटै संस्थामा लामो समय बसिरहनु उसैका लागि घातक हुन्छ भने संस्थाले पनि लामो समयसम्म कुनै अमूक व्यक्तिलाई चेपेर राख्ने नियत राख्नु भनेको संस्थाकै हितमा पनि फलदायी हुँदैन । भनिन्छ, असल सीईओ पाउनै कठिन हुन्छ र पाइहालियो भने उसलाई हटाउनै गाह्रो हुन्छ । शायद यो पछिल्लो पाठचाहिँ नेपाली वित्तीय संस्थाहरूले लिनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
वित्तीय संस्थाका कर्पोरेट नारा : काम र नाराबीचको सम्बन्ध मिल्छ त ?
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०६:३४
निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब लगानी
२ बैशाख २०७६, सोमबार ०८:१६
वित्तीय संस्थाका संस्थापकलाई राष्ट्र बैंकले दिएको अवसर
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०६:२६
कृषि विकास बैंकको नगद लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा जम्मा
पहिलो घण्टामा ७.३६ अंकले बढ्दा २४ करोडको कारोबार